ကျနော်နဲ့ ဆရာဝန်ကြီးများ …… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျနော်နဲ့ ဆရာဝန်ကြီးများ ……
ကျနော်နဲ့ ဆရာဝန်ကြီးများ ……
Posted by fatty on Jul 21, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 15 comments
ပြီခဲတဲ့တစ်လလုံး … ကျနော်ကိုယ် ငွေ့ငွေ့လေးဖျာနေတာ ၃ ပါတ်လောက်ရှိနေပါပြီ။ အဖျားတာရှည်ခြင်းသည်မကောင်းသော လက္ခဏာမို့ ပြနေကြဆရာဝန်ကြီးဆီ
ပြန်ပြရပါတော့တယ်။ အထူးကု နာမည်ကြီးဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးပါ။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင် Top စာရင်းဝင်ဆရာကြီးတစ်ဥိးပါ။ ဘာကြောင့်ကျနော် အဲဒီလိုကောက်ချက်ချရသလဲ
ဆိုရင် … ဘွဲ့တွေ အများကြီးပါ။ အထူးကုတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ လူနာ ၁၀၀ ခန့်ကို နေ့စဉ်ကြည့်နေရသူဆရာကြီးပါ။ လူနာ ၁၀၀ ခန့်ဆိုတာ တနေရာထဲမှာ
ပြောတာပါ ဆေးခန်းထိုင်တာက ၃ နေရာလောက်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားက တခါတလေေ၇ာက်လာတဲ့ ဆရာဝန်တွေတောင် ဆရာကြီးထံမှာ patient များပုံကို တအံ့တသြဖြစ်ကြရပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ၃ လ သိုိ့ ၆ လ တစ်ကြိမ် ပြနေကြပါ။ ဒီတခါတော့ အဖျားတာရှည်ပြီး လူက နုံးချိနေတာကြောင့်ကြားဖြတ်သွားပြရပါတယ်။
ဆရာကြီးက ဆီး ၀မ်းသွေး အသည်း function အကုန်စစ်ခိုင်းပါတယ်။ ကျနော့မှာ B ပိုးရှိနေတာကြောင့်လဲ ပါတာပေါ့လေ။
ဆေးစစ်ကြည့်တော့လဲ ဘာမှမယ်မယ်ရရ အပြစ်ရှာမရပါဘူး ..။ ဒါနဲ့ ဆရာကြီးက Antibiotic ခပ်ပြင်းပြင်း on လိုက်ပါတယ်။
တစ်ပါတ်သောက်ရပါတယ်။ တပါတ်ပြည့်သွားတော့ သက်သာသွားသဗျ။ အဖျားကြသွားပါပြီ။
နောက်သုံးရက်လောက်နေတော့ ပြန်ဖျားပြန်ပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ တခုခုတော့မှားနေပြီ …။ ဆရာကြီးဆီပြန်ပြေးဖို့ booking လှမ်းချိတ်တော့
ဆရာကြီးနိုင်ငံခြားသွားနေလို့ ဆေးခန်းမထိုင်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတော့တယ်။
ကျနော်ကလည်း အဖျားတန်းလန်းကြီးနဲ့ ဖြစ်နေတော့ မတတ်နိုင်တော့ဘူး တခြားဆရာဝန်တဦးဦးဆီ ပြေးမှဘဲဆိုပြီး
ဆေးတက္ကသိုလ် က ဒုပါမောက္ခ ဆရာဝန်ကြီး တစ်ဦးဆီပြေးရပြန်ပါတယ်။ ဆရာကြီးကိုတော့ အကျိုးအကြောင်း အသေအချာရှင်းပြရတာပေါ့လေ …..။
စ ကထဲက သူနဲ့ပြထားတာမဟုတ်ဘဲ အခုမှလာတာကိုး ..။ ဆရာကြီးက အရင်ဆရာဝန်ပေးထားတဲ့ဆေးတွေ check up လုပ်ထားတာတွေ
အကုန်ပြန်ကြည့်ပါတယ်။ … ကွာတာက အခုဆရာဝန်ကြီးမှာ လူနာ ၂၀ ထက်ပိုမကြည့်ပါဘူး ..။ ကျနော့ကို အစအဆုံး ပြန်စစ်ခိုင်းပါတယ် ..။
ဆေစစ်တာကလည်း … နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Austrilia နိုင်ငံရဲ့ branch တခုမှာစစ်ခိုင်းပါတယ် ..။
အတော်တော့ကုန်သဗျ ။ …အဖြေထွက်လာတာကတော့ ကျနော့မှာ B ပိုး လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး …။
ဒီနေရာမှာ ကြုံတုံးပြောပြချင်တာက အသည်းအထူးကုနဲ့ B ပိုးရှိတယ်ဆိုပြီး ၃ နှစ်လုံးလုံး ကျနော် ဆေးကုနေခဲ့ရတာပါဘဲ ..။
အဲဒီမှာ လိုက်ပိုကော ဆီလီဗိုက်တာ လီဗိုလင် လောက်နဲ့ဆေးပေးနေတော့ ကျနော်စိတ်မရှည်ဘဲ ဆက်မပြတော့ပါဘူး ..။
ကျနော်ဆုံးရှုံးသွားတာက နိုင်ငံရပ်ခြားက ခေါ်တဲ့ အလုပ်တခုကို ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် B ပိုးရှိလို့ဆိုပြီး ကျနော်လက်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ် ..။
အခုပြတဲကဆရာဝန်ကြီးကတော့ Antibiotic တွေကြောင့်လဲ ဖျားတတ်တယ် ။ ခင်ဗျားမှာ result တွေကမဆိုးပါဘူး … ဆီးချိုရှိတော့
အားနည်းနေတာမို့ဖျားတာပါ .. ဆိုပြီး ပိုးသတ်ဆေး မပေးပါဘူး …။ အားဆေးတွေပေးပါတယ် ..။ အရင်က အသည်းမကောင်းဘူး
ဆိုပြီးကျနော် သံဓါတ်ပါတဲ့ဆေးတွေရှောင်ခဲ့ပါတယ် …. အဲဒါကြောင့် သွေးအားနည်းနေပါတယ်။
ဆရာဝန်ကြီးကတော့ နာရီဝက် လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် အေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြပါတယ် ..။ လူနာ ၁၀၀ လောက်ကြည့်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးကတော့
၁၅ မိနစ်လောက်စကားပြောခွင့်ရအောင် မနဲလုရပါတယ် …။
တခါတခါ အခြေအနေအရ စဉ်းစားခြင့်ချိန်ဖို့ အထူးလိုအပ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား ……။
အဖြေထွက်လာတာကတော့ ကျနော့မှာ B ပိုး လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး …။)
ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးလဲ စိတ်မရှည်လို့ ဆက်မသောက်ဘူးလည်း ပြောတော့ ဘယ်လိုပျောက်သွားသလဲ သိချင်လို့ပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း B ပိုး ရှိသူမို့လို့။
သူ ရေးထားတဲ့ ပုံစံအရ ဆိုရင် အစကတည်းက မရှိတာ ဖြစ်ဖို့ များတယ် .. ဘာလို့ ဆို သူ စားခဲ့တဲ့ ဆေးတွေက ဘီပိုးအတွက် ကုထုံး မဟုတ်ဘူး .. အသည်းအားဆေးတွေပဲ .. ဘီပိုးအတွက် အင်မတန် ပြင်းတဲ့ ဆေးထိုးမှသာ ပျောက်ကောင်း ပျောက်နိုင်တယ် လို့ ဆိုတယ် ..
ဒါကြောင့် တို့တတွေကတော့ .. လူနာကို နှိပ်စက်တယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါ .. ဓါတ်ခွဲခန်း တခုခုက သိပ် လူနာအတွက် သိပ် အခြေအနေမကောင်းတဲ့ အဖြေ ထွက်ရင် နောက်ဓါတ်ခွဲခန်းတခုခုနဲ့တော့ ထပ်စစ်စေတယ် .. ဘာလို့ ဆို သူ့ ဘ၀အတွက် သိပ် အရေးကြီးပြီကိုး ..
ဓါတ်ခွဲခန်းတွေအတွက် ဝေဖန်တာတော့ မဟုတ်ပါ .. လူတွေ ကောင်းပေမယ့် ပစ္စည်းတိုင်းမှာ သက်တမ်း ဆိုတာ ရှိတဲ့အတွက် အဖြေကလဲ အဲသလိုပဲ ပြဿနာ ရှိနေနိုင်တယ်
ဓါတ်ခွဲခန်းတွေ တိကျမှုအကြောင်း တခါရေးဖူးတယ်..။
အခုလည်း ထပ်ပြောရမှာပဲ..။ အဲဒီစက်တွေက..လစဉ်ပြုပြင်..စစ်ဆေး..ကယ်ရီဘရိတ်လုပ်..ရတာ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဆရာဖက်တယောက် ဘီပိုးမရှိဘူးသိရလို့.. ဆရာဖက်နဲ့..မဟေသီအတွက်ပါ… ၀မ်းသာကြောင်း… ပြောလိုပါကြောင်း..။
ကျွန်တော် အသည်းဆရာဝန်တဦး MRTV4ကလွှင့်တဲ့ အစီအစဉ် လေးတစ်ခုကြည့်ဘူးတယ်
သူပြောတာကို ကျွန်တော် သဘောပေါက်သလိုပြန်ပြောရရင်
ဘီပိုးရှိတဲ့သူကို ဆေးကုရင် ကုလို့ရတဲ့ အဆင့်ရောက်မှ ( Hbe +) မှကုလို့ပျောက်နိုင်တယ် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါကုသမှုလုပ်တယ် အဲဒီမတိုင်ခင်မှာ အသည်းအားဆေးပဲ ပြန်ချိန်း ပြန်စစ်လုပ်တယ်
ပြန်စစ်ကလည်း DNA ဆို သိန်းကျော်ကုန်တော့ စိတ်ရှည်ဘို့ဆိုတာ လူရှည်တောင် ငွေမရှည်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်
ဟိုတလောက သတင်းစာမှာ မြန်မာပြည်က အသည်းရောဂါကုတဲ့ဆေးရှိနေပါတယ် အသည်းဆရာဝန်ကြီးထောင်ထားတဲ့ ဆေးရုံမှာထိုးလို့ရတယ် ပျောက်အောင်ကုသနိုင်ပါတယ် ဆိုပြီး ဆောင်းပါတစ်ပုဒ်ပါလာဘူးတယ် အဲဒီကိစ္စနဲ့ ဘီပီအိုင်လဲ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်သွားတယ် မဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲ ထပ်ကြားရတယ် ဘယ်လိုမဟုတ်တာလဲတော့ မသိဘူး
ဆေးရုံထောင်ထားတဲ့ အသည်းဆရာကြီးကလည်း အဲဒီရက်က နိုင်ငံခြားခရီးသွားနေလို့ပါ ပြန်လာရင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါမယ် ဆိုပြီး အခုထိတော့ မတွေ့မိသေးဘူး နိုင်ငံခြားကနေ သတင်းသမားတွေ မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး ပြန်လာလို့လား ပြောထားတာ မေ့သွားလို့လားတော့ မသိဘူး
လေးဖက်ရေ ဒီကိုရောက်စက ဆေးခန်းပြတော့ အတော်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ ကြုံခဲ့သေးတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ ချိန်းထားရင် အချိန်အတိအကျ သွားရတယ်။ နောက်ကျရင် မတွေ့ရဘူး။ စောပြီးသွားရင် ဆရာဝန်က မရောက်သေးဘူး။ နောက် အချိန်အတိအကျ သွားတော့ တွေ့ရတယ်။ သေသေချာချာကို စစ်ဆေး၊ ဆွေးနွေးပြီးမှ ကုတယ်။ တခုခုမှားမှာ ကြောက်ကြတယ်။ နောက် စပ်စုကြည့်မှ မှားလို့ ရော်ရရင် နင့်နေအောင် ရော်ရတာတဲ့။ “အရော်အစား ကြီးတယ်ပေါ့”။ နောက် ဆရာဝန်နဲ့ လူနာ အချိုးညီရှိတာမို့ ဆရာဝန်က လူနာကို မစောင့်သလို လူနာကလည်း ဆရာဝန်ကို စောင့်စရာ မလိုဘူးတဲ့။ ကိုယ်နဲ့ ချိန်းထားရင် ကိုယ့်တယောက်ကိုပဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကုပြီး ပြန်ပါတယ်တဲ့။ ကောင်းတာတွေကောင်းသလို မကောင်းတာကတော့ ကိုယ့်ဆီလို အချိန်မရွေး ကြိုက်တဲ့ဆေးခန်း သွားမရတာပဲ။
Did you go & test it in Inya Lake Hotel ?
I forget the name, but, it was in the ground floor of Inya Lake Hotel.
It will send your blood & etc to Australia.
This one is famous for accuracy of result.
မမ ခင်ဗျား … ကျနော်တချိန်က B ပိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ B ပိုး ရှိတဲ့သူဟာ အကောင်အရေအတွက်ပါစစ်ထားဘို့
လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ၆ လ တခါပြန်ပြန်ပြီးစိတ်ရှည်စွာစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ တချိန်ချိန်မှာ ကိုယ်ခံအား
တက်နေချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် B ပိုးအကောင်ရေ ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကို အမိဖမ်းဖို့လိုပါတယ်။
အကောင်ရေကျသွားပြီဆိုရင် … Antibody စစ်ရပါမယ်။ Antibody ထွက်ရင် ကာကွယ်ဆေးတောင်
ထိုးဘို့မလိုတော့ပါ။ မထွက်ရင်တော့ B ပိုး ကာကွယ်ဆေးထိုးရပါမယ်။ ကျနော်သိသလောက်ပေါ့
ဆရာဝန်များကို သေချာစွာ ရှင်းပြခိုင်းပါခင်ဗျား။
်Foreign Resident ခင်ဗျား ..အင်းယားလိပ်ထဲက ဟာက SOS ပါ ခင်ဗျား ..။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော် ကာကွယ်ဆေးထိုးရပါမယ်။ ဒီကဆရာဝန်ကြီးတွေကတော့ မြန်မာပြည်ထုတ်ကို မထိုးဖို့ ထောက်ခံကြပါတယ်။ ကျနော်ဘယ်နိုင်ငံကထုတ်တာကောင်းလဲဆိုတာ စုံစမ်းရပါ့မယ်ခင်ဗျား .။
အခုကျနော်စစ်တာက SML (Australia Branch မှာပါ )။ အခြားသိတာများရှိရင်လဲ အများအတွက်ပါ အကြံဥာဏ်များပေးပြီး ညွှန်းစေချင်ပါတယ်။
Your recent situation is serious, “B ပိုးအကောင်ရေ ကျဆင်းသွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကို အမိဖမ်းဖို့လိုပါတယ်။”, it’sarare chance, may be once inalife time.
If I am not wrong, those vaccines (ကာကွယ်ဆေး) need to be maintain in certain temperature ( in Freezer ). You see, Myanmar are generally careless people.
Who knows & who cares about this temperature was maintained in continuity.
No responsibility & no transparency & even, no skill.
I saw, foreigners ( mostly diplomats ) came to this SOS & got vaccination there.
So, I would like to advice you, to get vaccination from those internationally recognized clinics ( not from Myanmar owned & operated one ) even they may charge more money.
အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။ ဒေါက်တာ မိုးသီတာစိုးပြောသလို အရင်ကထဲက B ပိုး ရှိချင်မှ
ရှိလိမ့်မယ် ဆိုတာကလည်း ကျနော်တို့ အဲဒီတုန်းက သိပ်နားမလည်ခဲ့တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်
ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ B ပိုးရှိတာကို ၃ နေရာလောက်ခွဲ စစ်ပြီး positive ထွက်လို့သာ အတည်ပြုရတာပါ။
ကျနော်လည်း အကောင်ရေ မစစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတုန်းက အသက် ၃၀ ၀န်းကျင် ဆိုတော့ ၀န်ထမ်းဘ၀ပါ။
အကောင်ရေစစ်တာကလည်းဈေးကြီးတော့ သိပ်မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒီကဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်း
လူနာရှင်တတ်နိုင်မတတ်နိုင် အကဲခတ်လေ့ရှိတယ်ထင်ပါရဲ့ခင်ဗျား ..။ ဒီတခါ ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြတော့တောင် ပြန်စစ်ဗျာလို့မပြောပါဘူး ..။ အင်း .. ခင်ဗျားစစ်ထားတာ ၁ နှစ်တောင်
ကျော်နေပြီနော်လို့ … စကားစပါတယ်။ အဲဒီမှာမှ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ကျနော်ပြန်စစ်ကြည့်ချင်ပါတယ် ..
ဆိုမှ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ ပြန်စစ်လိုက်ပါအုံးဆိုပြီး စစ်ရမဲ့ဟာတွေရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့အတွက် အရင်ကထဲက မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် .. အနှစ် ၂၀ ကျော်လောက်နစ်နာသွားပါပြီ။ … မမှီ ပြောသလို နိုင်ငံတကာက အခြေအနေတွေသိရတော့ ကျနော်တို့
ဗဟုသုတ အင်မတန်ရပါတယ်။ သူများနိုင်ငံမှာ ဆေးတွေနေရာတကာမှာဝယ်မရတော့ ဒီကဘဲ
ပို့နေရပါတယ်။ ကျနော့သား poly တက်နေတော့ တခါတရံ ပင်ပန်းလွန်းတာကြောင့်ကျောင်းပျက်
ပါတယ်။ ကျောင်းပျက်တိုင်း ဒီအတိုင်းခွင့်ယူလို့မရတော့ ဆရာဝန်ဆီသွားသွားပြီး ဆေးခွင့်ယူနေရ
ပါတယ်။ အချိန်ပိုင်း အလုပ်လုပ်တဲ့ငွေက ဆရာဝန်ဆီ ရောက်ရောက်နေလို့ … သမင်မွေးလိုက်
ဦးလေး ဥုံဖွ ဆရာဝန် နဲ့ တွေ့သွားလို့ ဘီ ပျောက်သွားတာ.. ဟဲဟဲ.. နောက်တာနော်..
ရောဂါ တခု ပျောက်သွားတယ် မရှိတော့ဘူး ဆိုတော့ ကြားရတာ ၀မ်းသာစရာပါပဲ။
စိတ်ဖိစီးမှု တပိုင်းတစတော့ သက်သာသွားမယ် ထင်တယ်။
အင်းဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မှာ B ပိုးမရှိဘူး ဆိုတာ သိလိုက်ရတာ ကတော့ အဆိုးထဲက အကောင်းပါပဲ ၀မ်းသာစရာပေါ့
ငါဦးဖက် တွေဝေဆဲ… (အဆိုတော် ဘိုဘိုဟန် သံစဉ်အတိုင်းဖတ်ပါ)
ကို ဖတ်ဟုတ်လို.လား ဘီ ရဲ.အစ်ကိုေ၇ာ ရှိတယ်ဆို